6 Eyinom akyi no, Yesu siim kɔɔ Galilea, anaa Tiberia, po* no agya.+ 2 Na nnipakuw kɛse bi kɔɔ so dii n’akyi, nsɛnkyerɛnne a wohui sɛ ɔreyɛ wɔ wɔn a wɔyare ho nti.+ 3 Enti Yesu kɔɔ bepɔw bi so,+ na ɔne n’asuafo no kɔtenaa hɔ. 4 Saa bere no na twam no,+ Yudafo afahyɛ no, abɛn. 5 Bere a afei Yesu maa n’ani so hui sɛ nnipakuw kɛse bi reba ne nkyɛn no, obisaa Filipo sɛ: “Ɛhe na yɛbɛtɔ paanoo ama nnipa yi adi?”+ 6 Nanso ɔkaa eyi de sɔɔ no hwɛe, efisɛ na ɔno ankasa nim nea ɔrebɛyɛ. 7 Filipo buaa no sɛ: “Paanoo denare ahanu rensõ sɛ obiara benya kakraa bi mpo.”+ 8 N’asuafo no mu biako, Andrea, Simon Petro nua no, ka kyerɛɛ no sɛ: 9 “Abarimaa bi wɔ ha a ɔwɔ atoko paanoo+ anum ne mpataa nketewa abien. Nanso eyi bɛyɛ nnipa bebrebe yi dɛn?”+ 10 Yesu kae sɛ: “Momma nnipa no ntenatena ase sɛnea wɔyɛ wɔ adidii.”+ Na sare pii nso wɔ hɔ. Enti mmarima a wɔn dodow bɛyɛ mpemnum no tenatenaa ase.+ 11 Ɛnna Yesu faa paanoo no, na ɔdaa ase no, ɔkyɛ maa wɔn a wɔtete hɔ no; saa ara nso na mpataa nketewa no, ɔmaa wɔn dodow a wɔpɛ.+ 12 Afei bere a wɔameemee+ no, ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Mommoaboa nea aka ase no ano na biribiara ansɛe kwa.” 13 Enti wɔboaboaa ano, na atoko paanoo a wɔn a wodii no gyaw wɔ ase no yɛɛ nkɛntɛn dumien mãmã.+ 14 Afei bere a nnipa no huu sɛnkyerɛnne a ɔyɛe no, wofii ase kae sɛ: “Nokwasɛm ni, odiyifo+ a ɔreba wiase no ni.” 15 Enti bere a Yesu hui sɛ wɔpɛ sɛ wɔkyere no yɛ no ɔhene no, ɔtwee+ ne ho, na ɔno nko ara kɔhyɛɛ bepɔw no so bio. 16 Onwini dwoe no, n’asuafo no kɔɔ mpoano,+ 17 na wɔforo tenaa ɔkorow bi mu sɛ wɔretwa po no akɔ Kapernaum. Saa bere no na esum aba nanso na Yesu mmaa wɔn nkyɛn. 18 Afei mframa kɛse bɔ maa ɛpo no hurui.+ 19 Afei bere a wɔharee bɛyɛ akwansin abiɛsa anaa anan no, wohui sɛ Yesu nam po no so rebɛn ɔkorow no; na wosuroe.+ 20 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛyɛ me; munnsuro!”+ 21 Afei de na wɔpɛ sɛ ɔbɛtena ɔkorow no mu, na ankyɛ koraa na ɔkorow no duu asase a wɔrekɔ so no so.+ 22 Ade kyee no, nnipakuw a na wogyina ɛpo no agya no hui sɛ ɔkorow biara nni hɔ gye ketewa biako bi, nanso Yesu anka n’asuafo no ho antena ɔkorow no mu, na asuafo no nkutoo na wɔkɔe; 23 nanso akorow fi Tiberia baa beae a Awurade daa ase ma wodii paanoo no nkyɛn baabi. 24 Enti bere a nnipakuw no hui sɛ Yesu ne n’asuafo no mu biara nni hɔ no, wɔkɔtenatenaa wɔn akorow nketewa mu baa Kapernaum bɛhwehwɛɛ+ Yesu. 25 Na bere a wohuu no ɛpo no agya no, wobisaa no sɛ: “Rabi,+ bere bɛn na wobaa ha?” 26 Yesu bua see wɔn sɛ: “Nokware, nokware, mise mo sɛ ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne a muhui nti na morehwehwɛ me, na mmom paanoo no a mudi mee ntia.+ 27 Monnyɛ aduan a ɛsɛe ho adwuma,+ na mmom monyɛ aduan a ɛtena hɔ de kɔ daa nkwa+ mu a onipa Ba no de bɛma mo no ho adwuma; na ɔno na Agya no, Onyankopɔn ankasa, de ne nsɔano agye no atom.”+ 28 Enti wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛdɛn na yɛnyɛ na yɛayɛ Onyankopɔn nnwuma?” 29 Yesu bua see wɔn sɛ: “Eyi ne Onyankopɔn adwuma sɛ mubegye nea Onii no somaa no+ no adi.”+ 30 Enti wobisaa no sɛ: “Ɛnde dɛn sɛnkyerɛnne na wobɛyɛ+ na yɛahu na yɛagye wo adi? Adwuma bɛn na woreyɛ? 31 Yɛn agyanom dii mana+ wɔ sare so sɛnea wɔakyerɛw sɛ, ‘Ɔmaa wɔn paanoo fi soro dii.’”+ 32 Enti Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nokware, nokware, mise mo sɛ, ɛnyɛ Mose na ɔmaa mo paanoo a efi soro no, na mmom m’Agya na ɔma mo nokware paanoo a efi soro no.+ 33 Na Onyankopɔn paanoo ne nea osian fi soro na ɔma wiase nkwa no.” 34 Enti wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, ma yɛn paanoo yi bi daa.”+ 35 Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mene nkwa paanoo no. Nea ɔba me nkyɛn no, ɔkɔm renne no da, na nea ogye me di no, osukɔm renne no da.+ 36 Nanso maka akyerɛ mo sɛ, moahu me nso munnye nni ara.+ 37 Biribiara a Agya no de ma me no bɛba me nkyɛn, na nea ɔba me nkyɛn no, merempam no da;+ 38 efisɛ mifi soro+ aba sɛ merebɛyɛ nea ɔsomaa me no apɛde, ɛnyɛ m’ankasa m’apɛde.+ 39 Nea ɔsomaa me no apɛde ne sɛ meremma nea ɔde ama me no mu biara nyera, na mmom sɛ menyan+ no da a edi akyiri no. 40 Na m’Agya no apɛde ne sɛ obiara a ohu Ɔba no na ogye no di no benya daa nkwa,+ na menyan no da a edi akyiri no.”+ 41 Afei Yudafo no fii ase nwiinwii sɛ waka sɛ: “Mene paanoo a esian fii soro no”;+ 42 na wofii ase kae sɛ:+ “Ɛnyɛ Yesu, Yosef ba+ a yenim ne papa ne ne maame no ni? Ɛyɛɛ dɛn na seesei ɔka sɛ, ‘Mifi soro na mebae’?” 43 Yesu bua see wɔn sɛ: “Munnyae anwiinwii. 44 Obiara ntumi mma me nkyɛn gye sɛ Agya a ɔsomaa me no twe no;+ na menyan no ɛda a edi akyiri no.+ 45 Wɔakyerɛw wɔ Adiyifo no mu sɛ, ‘Yehowa bɛkyerɛkyerɛ wɔn nyinaa.’+ Obiara a wate afi Agya no nkyɛn na wasua no ba me nkyɛn.+ 46 Ɛnyɛ sɛ obi ahu Agya no,+ gye nea ofi Onyankopɔn hɔ no; oyi na wahu Agya no.+ 47 Nokware, nokware, mise mo sɛ, Nea ogye di no wɔ daa nkwa.+ 48 “Mene nkwa paanoo+ no. 49 Mo agyanom dii mana+ wɔ sare so nanso wowuwui. 50 Eyi ne paanoo a esian fi soro no, sɛ obiara nni bi na wanwu. 51 Mene paanoo a ɛte ase a esian fii soro bae no; sɛ obi di paanoo yi bi a, ɔbɛtena ase daa; na nokwarem no, paanoo a mede bɛma no ne me honam+ esiane wiase nkwa nti.”+ 52 Ɛnna Yudafo no fii ase kasakasaa wɔn mu sɛ: “Ɛbɛyɛ dɛn na onipa yi atumi de ne honam ama yɛn adi?” 53 Enti Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nokware, nokware, mise mo sɛ, moanni onipa Ba no honam+ annom ne mogya+ a, munni nkwa+ wɔ mo mu. 54 Nea odi me honam nom me mogya no wɔ daa nkwa, na menyan+ no da a edi akyiri no; 55 na me honam yɛ aduan ankasa, na me mogya nso yɛ anonne ankasa. 56 Nea odi me honam na ɔnom me mogya no wɔ me mu, na me nso mewɔ ne mu.+ 57 Sɛnea Agya a ɔte ase+ no somaa me na Agya no nti na mete ase no, saa ara na nea odi me honam no, me nti ɔno nso bɛtena ase.+ 58 Eyi ne paanoo a esian fii soro bae no. Ɛnte sɛ nea mo agyanom dii nanso wowuwui no. Nea odi paanoo yi bɛtena ase daa.”+ 59 Ɔkaa eyinom bere a ɔrekyerɛkyerɛ wɔ bagua bi ase wɔ Kapernaum no. 60 Enti bere a n’asuafo no mu pii tee eyi no, wɔkae sɛ: “Asɛm yi ano yɛ den; hena na obetumi atie?”+ 61 Nanso esiane sɛ na Yesu nim wɔ ne mu sɛ n’asuafo no renwiinwii eyi ho nti, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Eyi to mo hintidua+ anaa? 62 Na sɛ muhu onipa Ba no sɛ ɔreforo akɔ baabi a na ɔwɔ kan no nso ɛ?+ 63 Honhom na ɛma nkwa;+ honam de, ɛnka hwee koraa. Nsɛm a maka akyerɛ mo no yɛ honhom+ ne nkwa.+ 64 Nanso mo mu bi nnye nni.” Asɛm no ne sɛ efi mfiase no na Yesu nim wɔn a wonnye nni ne nea na obeyi no ama.+ 65 Enti ɔtoaa so kae sɛ: “Eyi nti na maka akyerɛ mo sɛ, obiara ntumi mma me nkyɛn gye sɛ Agya no ama no kwan.”+ 66 Eyi nti n’asuafo no mu bebree san kɔɔ nneɛma a ɛwɔ akyi+ no ho, na wɔne no annantew bio.+ 67 Enti Yesu bisaa dumien no sɛ: “Mo nso mopɛ sɛ mokɔ anaa?” 68 Simon Petro+ buaa no sɛ: “Awurade, hena nkyɛn na yɛnkɔ?+ Wo na wowɔ daa nkwa nsɛm;+ 69 na yɛagye adi na yɛabehu sɛ wone Ɔkronkronni a ofi Onyankopɔn hɔ.”+ 70 Yesu buaa wɔn sɛ: “Ɛnyɛ me na mepaw mo nnipa dumien yi?+ Nanso mo mu biako yɛ otwirifo.”+ 71 Nea na ɔreka ne ho asɛm ankasa ne Yuda, Simon Iskariot ba no; ɛwom sɛ na ɔyɛ dumien no mu biako de, nanso na ɔrebeyi no ama.+